प्रदेश १ को अधिवेशन अचानक किन स्थगित भयो ? « News24 : Premium News Channel
प्रदेश १ को अधिवेशन अचानक किन स्थगित भयो ?
विराटनगर । बिहीबार हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन अचानक स्थगित भएको छ ।
आज १६ गते दिउँसो २ बजे प्रदेश १ को अधिवेशनउद्घाटनकार्यक्रम राखिएको थियो उद्घाटन समारोहमा कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका कांग्रेस कार्यकर्ताहरु भोला भइसकेका थिए । तर, करिव तीन घण्टा ढिलो गरेर केन्द्रिय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले आजको उद्घाटन सत्र विविध कारणले स्थगित गर्नु परेको जानकारी गराए ।
नेपाली कांगग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्र्तगत प्रदेश १ को अधिवेशनमा नेतृत्वको लागि गुरुराज घिमिरे र उद्धव थापाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । घिमिरेले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् भने थापाले सिटोलातर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । थापालाई प्रधानमन्त्री देउवाको पनि समर्थन रहने बताइएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य कृष्ण सिटौलाले भोलि बिहान ८ बजे सोही स्थानमा उद्घाटन सत्र गरिने भएकाले सबै कार्यकर्तालाई उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन् । नेताहरुबीच सहमति जुट््न नसकेपछि आजको उद्घाटन सत्र सञ्चालन हुन सकेन ।